Iray amin'ireo firenena mahafinaritra indrindra eran-tany i Nepal . Tsy misy toeram-ponenana toy izany, tanàna lehibe indrindra, izay misy ny tantara tranainy, ny toetrany tsy manam-paharoa, ny tampon'ny tendrombohitra sy ny tsangambato ara-pivavahana dia mifamatotra akaiky. Rehefa mitsidika ny firenena ianao dia hahita karazana fialam - boly isan-karazany: avy amin'ny fiakarana Everest mankany fivahinianana mankany amin'ny tempoly masina.
Ny tanàna malaza indrindra any Nepal
Ny iray amin'ireo toerana malaza indrindra ao amin'ny firenena dia ny Lohm Kathmandu , izay mizara ho tanàna telo:
Patan, na Lalitpur - renivohi-panjakana renivohitr'i Nepal, izay foiben'ny kolontsaina ara-pinoana. Maro ireo tempoly hindoa sy bodista. Ny tanàna dia malaza amin'ny tsangambato manan-tantara maro (maherin'ny 1000 bahals, monuments, stupas, pagodas sy ny rafitra hafa), zavakanto sy asa tanana, asa tanana ary fomban-drazana samihafa.
Bhaktapur , na Khvopa, dia tanànan'i Nevar taloha ary misy tsangambato maromaro miavaka sy miavaka. Izy io dia laharana faha-3 ao Nepal noho ny mponina ary ny kely indrindra amin'ireo tanàna telo any an-drenivohitra.
Kathmandu no renivohitr'i Nepal, izay ahitanao ny trano fandraisam-bahiny fahiny, làlana ety, kianja an-jatony, lapa, kianja ary tempolin-jatony mihoatra ny taonjato maromaro: natsangan'i King Malla. Ity tanàna tranainy ity dia ivontoerana ara-toekarena, fitantanana, ara-tantara, ara-kolontsaina ary ara-politika
Pokhara - ny tanàna dia miorina eo afovoan'ny firenena akaikin'ny Farihin'i Feva-Tal any amin'ny haavony 827 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ny toeram-ponenana dia manana ny lazany faharoa amin'ny lazan'ny mpizahatany ary manintona azy ireo amin'ny toerana malaza sy mahagaga. Any akaikiny dia ireo tampon'ny tendrombohitra avo indrindra any Nepal: Manaslu, Daulagiri, sns. Eto dia miaina ireo arkeology malaza Himalayana. Ao amin'ny fotodrafitrasa dia tokony ho hita ny hotely , trano fisakafoanana ary fivarotana, ny monasiterin'i Bisva Shanti, Stupa Shanti. Mahagaga ny fiheverana fa ny lava-masina masin'i Rupa sy Mahendra Gufa, ny renirano Davis ary ny dobo filomanon'i Venus-Tuls.
Lumbini dia tanàna iray izay, araka ny fanazavana, ny Buddha Shakyamuni dia teraka sy natsangana (nanomboka tamin'ny 563 ka hatramin'ny 483 talohan'i JK) - ilay nanorina ny fivavahan'ny Bodisma. Ny faritany dia any atsimon'ny firenena, ao amin'ny teatra Nepaley sy sisintany amin'i India (12 km). Io no fitoerana masina indrindra tsy natao ho an'ireo mpitety fiangonana, fa ho an'ny mpizaha tany. Eto ianao dia afaka mahita ny tempolin'i Maya Devi fahiny, natsangana ho fanomezam-boninahitra ny renin'i Gautama, sehatra vato nosoratan'i King Ashoka, ary faritra arkeolojika misy ny sisa tavela amin'ny fahaterahana ny Bodisma.
Dhulikhel na Shrikhandapur dia tanànan'i Newark any akaikin'ny tanànan'i Tamang 30 km miala an'i Kathmandu. Malaza amin'ny fomban-drazana fahiny sy ny loko malaza izy io. Eto ianao dia afaka mahita tsara ireo faritra Himalayan izay miala an'i Everest ka hatrany amin'ny Tendrombohitra Langtang, masoandro miposaka sy ny orana amin'ny tendron'ny lanezy. Any amin'ny tanàna dia misy stupas bodista sy temples Hindu. Avy eto dia toeram-pivarotana malaza, ohatra, mankany amin'ny tranokalan'ny fifandraisan-davitra, izay misy tranokala tsara tarehy misokatra.
Chitwan dia valan-javaboahary Royal, rakotra ala mikitroka, izay mametraka trano na bungalows manokana. Ireo rafitra ireo dia manana ny zavatra ilaina rehetra ary tsy misy azo antoka. Eto ianao dia mahita bibidia (anisan'izany ny voay sy ny honko) any amin'ny tontolo iainana voajanahary, mitaingina elefanta, mitaingin-jatony amin'ny ala maitso na mihaino ny feon'ny natiora: vorona mihira, cicadas, roaran'ny biby mpiremby.
Ny Lukla - dia ao amin'ny distrikan'i Khumbu ary ny toeram-piantsoana ireo izay mankany amin'ny Tendrombohitra Everest sy ny manodidina azy. Ny velarantanin'ilay tanàna dia 519 kilometatra toradroa. Amin'izany dia tsy mitondra fiara na lalana amin'ny làlambe, ary ianao dia hijanona eto amin'ny fiaramanidina, ka ny seranam-piaramanidina dia heverina ho iray amin'ireo loza mampidi-doza indrindra eto an-tany. Ireo mpizahatany dia afaka mividy ny fitaovana ilaina amin'ny fanamiorana, ary amin'ny làlana hiverina - hamidy izany.
Ao amin'ireo toeram-ponenana ireo dia afaka mahita ny trano fandraisam-peo nentim-paharazana ianao, mahafantatra tsara ny sakafo nentim-paharazana , mitsidika toerana ara-pivavahana ary mitsambikina ao an-tsaha ao an-toerana.
Ski Resorts any Nepal
Any amin'ny firenena dia tsy mahita lalana mahazatra, tsy misy fiarandalamby, tsy misy fitaovana fampandehanana, tsy misy hotely fivarotana. Ny skiing any Nepal dia tsy laharam-pahamehana, fialantsasatra be sy malaza any an-tendrombohitra izany.
Marina tokoa, tato anatin'ny taona vitsy dia nanomboka nihaino tsara io torolalana io. Ny orinasan-dalamby dia mandamina fitsangatsanganana eny an-tampon'ny tendrombohitra, izay tena faratampony, satria tsy misy fitaovana izy ireo. Azonao atao ny manalavitra ny havoana amin'ny ski na ny snowboards.
Ny atleta dia entin'ny helikoptera amin'ny 3000 ka hatramin'ny 3000 m, arakaraka ny fampiendrehana ny mpikambana ao amin'ny ekipa. Mihamitombo isan'andro io elanelana io. Avy amin'ireto lafiny ireto, manomboka amin'ny fiantsoana tsy misy fotony sy ny fikajiana mahafinaritra amin'ny fiantsoana tanteraka ny fiantsoana. Eto ianao dia afaka manjavozavo, ary amin'ny voninahitrao dia hiantso lalana izy ireo. Amin'ny tranga toy izany, dia misy ny taratasy fanamarinana sy ny horonan-tsary miaraka amin'ny fandresenao. Raha eny, ny fitaovana dia tsy maintsy nividy teo an-toerana, ary avy eo dia ento eny an-tendrombohitra.
Ny fandaniana ny alina any an-tendrombohitra miaraka amin'ny mari-pahaizana ambany indrindra dia tsy voatery, noho izany dia mijanona any amin'ny tanàna kely na tanàna lehibe ireo mpandeha. Ny tena malaza amin'izy ireo dia:
Annapurna no faritra rakotra ranomandry any Nepal, izay olona 8000 voalohany no resin'ny olona. Afaka mandeha ianao manomboka amin'ny fiandohan'ny Desambra hatramin'ny tapaky ny volana Jona.
I Namche-Baazar dia tanàna iray any an-tendrombohitra izay miorina any amin'ny Himalaya any amin'ny 3440 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Eo amin'ny lalana mankany amin'ny tampon'ny Tendrombohitra Everest izy io. Eto dia ilaina ny mandany andro vitsivitsy izay efa nanam-potoana hiombonan'ny zavamanitra alohan'ny hifindrany.
Jomsom - eo amin'ny 3800 m ambonin'ny tany ny tanàna ary malaza amin'ny fombam-pivavahana marôskiana, tantaram-pinoana ary fomban-drazana eo an-toerana. Misy monastera Bodista maro sy seranam - piaramanidina iray .
Muktinath dia tranokala malaza ho an'ny Hindus sy Bodista. Mino ny fahamasinan'ny farihy izay manome famonjena rehefa maty izy ireo. Ao anatin'ny iray amin'ireo tempoly ao an-tanàna, Brahma dia nandrehitra afo iray mandrakizay izay mirehitra mandra-pahatongan'ny fotoana. Eto ianao dia afaka mahita monastera ara-pivavahana sy shaligrams fahiny (shells).
Nagarkot - toerana iray eo amin'ny 2200 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ny mpizaha tany dia voasariky ny tendrontany avaratr'i Himalayas, ny rivotra madio, ny tanimboly maitso ary ny toerana tsy mampino. Any Hindu, Changgu Narayan , ny tranokely Hindu, natokana ho an'i Vishnu. Eo anoloan'ny fidirana ao amin'ny tempoly dia misy sarivongan'i Garuda, vorona mitaingina, noforonina tamin'ny taonjato faha-5.
Raha tsy te-hanana fitaovana amin'ny tenanao manokana ianao dia afaka manakalo Sherpa porter amin'izany. Ny fanaovana an'ireny dia izao dia mila akanjo sy kiraro feno hatsaram-panahy. Rehefa mandehandeha eny am-pandehanana ianao, dia maka toro-lalana mahomby aminao foana, satria mora very ny very ao amin'ny Himalaya.
10 olo-malaza miaraka amin'ny maso maro
Mandrehitra rosia, maniry ny fahavaratra rehetra - karazam-bary maivana
Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny tovovavy iray
Wedding any an-dranomasina
Ahoana no fomba hanamboarana koba amin'ny famolavolana?
Beyonce, Adele sy kintana hafa no nanakana ny fotoana, nandray anjara tamin'ny flash mob
Harena varimbazaha amin'ny hena
Brôcho vita amin'ny perla
Ahoana no tsara indrindra hahatsiarovana ny fampahalalana mialoha ny fanadinana?
Mofo vita amin'ny volafotsy
Havoaka ny biography of Naomi Campbell izay misy roa